कस्तो होला बाबुराम बिना एमाओवादीको नम्बर वान बन्ने यात्रा !
Thursday, 24 Mar, 2016 12:36 PM
माओवादी पार्टी एक भएको बेला पनि बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा पछिल्लो समय एमाओवादी कार्यकर्तालाई ‘नम्वर वान ’बन्ने भाषणको व्यापार गर्दै हिडेको छ । जो पछिल्लो सयम ६ चिरामा विभाजित भइसकेको अवस्था छ । ६ टुक्रामा टुक्रिएको माओवादी पार्टीको एक प्रमुख पार्टी एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले त पटक–पटक एक नम्बरको पार्टी बनाउने सार्वजनिक उद्घोष समेत गरेका छन् । माओवादी त्यत्तीबेला पावरफुल थियो जतिबेला बाबुराम,वैद्य,बादल,विप्लवहरुसंग संगै थिए ।
तर आज ठूलो प्रश्न छ, एमाओवादीको अघि के सवै माओवादी एक ठाउँमा आउदैमा वा नआएमा एमाओवादी नम्बर वान बन्ने हैसियतमा छ त ? एकजना विश्लेषक भन्छन–‘माओवादी अब एक नम्बरको पार्टी बन्छ भन्नु र गधालाई धोएर गाई बनाउछु भन्नु उस्तै हो ।’ एक नम्बर पार्टी बनाउन दौडिरहेका प्रचण्डले किन बेलाबेला यस्तो कार्ड फ्याक्छन त्यो वुझिनसक्नु छ । त्यसो त दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनमा पनि वैद्यले पार्टी छाडेको अवस्थामा प्रचण्डले मेचिकाली दौडाहामा एमाओवादीले २ तिहाई मत ल्याउने ठोकुवा नै गरेका थिए । अन्त्यमा प्रचण्डले कल्पनासम्म नगरेको २५ सीटमा खुम्चीयो, एमाओवादी । तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना कमजोरीहरु भने सच्च्याउने हिम्मत कहिल्यै गरेनन् ।
प्रचण्डका ५ कमजोरी यस्ता छन् ।
पहिलो: प्रचण्डले कहिल्यै पनि पार्टीलाई विधि र पद्धतीमा व्यवस्थित गर्न सकेनन् । अरुका लागि विधिका कुरा गर्ने तर उनी आफु विधीमा कहिल्यै चलेनन्,जो माओवादीभित्रको ठुलो समस्या हो ।
दोश्रो : एमाओवादीमा गल्ती गर्नेलाई कार्वाही र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था अर्थात उपयुक्त मुल्याङ्कन छैन् ।
तेश्रो : प्रचण्ड सर्वाहारा वर्गका नेता हुन । तर उनको जीवन सदागिपुर्ण छैन । उनको लवज कुनै सम्भ्रान्त वर्गभन्दा कम छैन,प्रचण्डभन्दा कयौ गुणा सरल जीवन स्वर्गीय काग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले जिउँथे ।
चौथौ: प्रचण्डको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो नाता–गोता र निकटता । जसले प्रचण्डलाई सधैभरी बदनामित गरिरह्यो । उनले जहिल्यै पनि आफुनिकटका मान्छेलाई मात्रै बोक्दै आएको आरोप खेप्दैै आएका छन् ।
पाचौं: प्रचण्डको पाँचौ समस्या हो उनको आफ्नै मुखबाट निष्कने बोली । उनले आफ्नो बोलीमा लगाम नलगाउदा पार्टी भित्र र बाहीर जहिले पनि समस्या हुदै आएको छ भने प्रचण्डले माफी समेत माग्नुपरेको छ । भावाशेषमा वग्ने उनको बानीले प्रत्यक्ष मार पार्टीलाई परेको छ ।
कस्तो बनाउने पार्टी ?
एमाओवादी युवा नेता खगराज भट्टका अनुसार एमाओवादी नयाँ परिवेशमा नयाँ भएर आउन खोज्दैछ । मौलिक पहिचान सहितको मौलिक पार्टी बनाउन सक्ने कि नसक्ने माओवादीका अघि ठूलो चाइलेन्ज भएको उनको वुझाई छ । माओवादीले पहिचान र सामाथ्र्यका आधारमा आफुलाई रुपान्तरण गर्न सके माओवादी पहिलो पार्टी बन्न सक्ने उनको दावी छ । विचार र राजनीति एक ठाउमा आए पार्टी ठिक ठाउँमा आउने युवा नेता भट्ट बताउँछन् ।
बाबुराम बिनाको एमाओवादी
बाबुराम एमाओवादी भित्रको मुख्य योजनाकार थिए । माओवादीको खाका लेख्नेदेखि अन्य कतिपय निति निर्माणको काम बाबुरामले नै गर्दै आएका थिए । यहाँसम्मकी एमाओवादीको पहिलो र दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनको प्रतिवद्धतापत्र समेत भट्टराईले नै तयार गरेका थिए । तर उनी हाल एमाओवादी छैनन् । बाबुरामकै भनाईलाई आधार मान्ने हो भने एमाओवादी रातो स्टीकर लागेको घर हो । के त्यसो भए बाबुराम विनाको एमाओवादी नम्बर वानको बाटोमा आउँन सक्छ ?
एमाओवादी नेता भट्टका अनुसार बाबुरामको बर्हिगमन ठुलो झट्का भएपनि माओवादीले आफुलाई रुपान्तरण गरे अवसर छ । उनको वुझाईमा वैद्यले पार्टीको आन्तरीक जीवनमा प्रभाव पार्छन भने बाबुरामले जनताको लेबलमा । चुनावी परिणाम जनताकै तहबाट आउँछ । भट्ट भन्छन्–‘हामीले आफुलाई एमाले,कांग्रेसभन्दा भिन्न देखाउन सक्ने कि नसक्ने हाम्रो भविष्य त्यसैमा निर्धारण हुन्छ ।
सरकारमा गएकाले बदनाम गराए
माओवादी भित्र पछिल्लो समय सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ओली सरकारमा भोज खान गएका माओवादी मन्त्रीको । स्वयंम ओलीले केहि गर्न त सकेनन्,सकेनन्,माओवादीबाट सकारमा गएका मन्त्रीहरुले रिवन काट्नेदेखि अन्य काम गर्न सकेनन् । सरकारमा माओवादीले दक्ष मान्छे नपठाएको माओवादीभित्रै चर्चा छ ।
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले त सार्वजनिक रुपमै माओवादी मन्त्रीको कामको आलोचना गर्दै आएका छन् । माओवादी नेताका अनुसार माओवादी मन्त्रीको यस्तै हर्कत र काम हुने हो भने भएको माओवादी इज्जत पनि माटोमा मिल्न सक्छ । मुलुक संकटको बेला गृहर आपुर्तीमन्त्री सम्हाल्दा पनि जनताले सास्ती खेप्नुपरेको छ । आपुर्तीमन्त्री गणेशमान पुन त झन कार्टुन नै बन्न पुगेका छन् ।
नम्बर ३ बाट नम्बर १ कसरी
प्रचण्डले नम्बर ३ मा रहेको हालको एमाओवादीलाई अर्को निर्वाचनमा नम्बर वान बनाउने बताएपनि त्यसको तयारी भने देखिदैन् । अब माओवादी एक भएपनि त्यत्ती सजिलै माओवादी पहिलो बन्ने सम्भावना देखिदैन् । कारण हो,जनतामा माओवादीप्रतिको विश्वास गुम्नु । त्यो विश्वास माओवादीले आफ्नै कथनी करणीले गुमाएका हुन् ।
विभाजीत कार्यकर्ताको मनोविज्ञान,र नयाँ निती कार्यक्रम बिना भाषणमा मात्रै नम्बर १ राम्रो लाग्छ तर यथार्थमा त्यो तयारी देखिदैन् । अहिलेसम्मको माओवादी भनेको तत्कालीन नेकपा माओवादी नै एमाओवादी भएपनि । प्रचण्ड एक्लैले यो परिस्थितीसम्म ल्याइपुगाएका होइनन,सवैको योगदान छ ,तर अब सबै एकठाउमा हुने सम्भावना त्यत्ती देखिदैन् । यस्तो अवस्थामा एमाओवादीलाई ३ नम्बरमै टिकिरहन पनि मुस्कील पर्न सक्छ ।